बाहिरी चक्रपथको डिपीआर तयार, कहिले बन्ला चक्रपथ ? « News24 : Premium News Channel
बाहिरी चक्रपथको डिपीआर तयार, कहिले बन्ला चक्रपथ ?
काठमाडौं । बाहिरी चक्रपथ निर्माणको कथा सुरु भएको २ दशक पूरा भएको छ । आर्थिक वर्ष २०५५–०५६ मा तत्कालिन सरकारले १० वर्षमा बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । दलीय स्वार्थको कोपभाजन बनेको बाहिरी चक्रपथ कहिले जग्गा विवाद त कहिले मुआब्जाका कारण अलमलमा परेको छ ।
काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर तीनै जिल्ला जोड्ने गरी निर्माण गरिन लागेको बाहिरी चक्रपथको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम सकिएको छ । पहिलो चरणमा चोभारदेखि सतुगंलसम्मको ६ दशमलव ६ किलोमिटर खण्डमा जग्गा रोक्का तथा कित्ताकाटको काम अघि बढेपनि गत वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्को त्रुटिपूर्ण निर्णय पुनः समस्या बनेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा ‘जग्गा अधिग्रहण गर्ने’ भन्ने शब्द छुटेपछि समस्या देखिएको हो । निर्णयका कारण बाहिरी चक्रपथ निर्माणको फाइल अहिले शहरी विकास मन्त्रालयमा बिचाराधिन अवस्थामा रहेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ ।
काठमाडौं– चोभार, गाम्चा, सतुंगल, नैकाप, पुरानो भञ्ज्याङ, सीतापाइला, नागार्जुनडाँडा, नेपालटार, गोंगबु, टोखागाउँ, चपली, कपन, जगडोल, सन्डोल र थलीडाँछी ।
भक्तपुर–गामफेदी, पकाउनेपाटी, बाँसबारी, याङ्डोल, मसानडोल, भातेढिकुरो, नयाँ ठिमीबाट दधिकोट
ललितपुर– लुभु, सिद्धिपुर, ठैँब, धापाखेल, ठेचो, छम्पी, खोकना र बुङमती
कुल ५० मिटर चौडाइ र ७२ किलोमिटर लम्बाइ रहेको बाहिरी चक्रपथको दुरी काठमाडौंमा ३५, ललितपुरमा १६ र भक्तपुरमा २१ किलोमिटर रहनेछ । आयोजना बन्ने हल्ला भएपछि भूमाफियाको सक्रियता बढ्नु अर्को समस्या हो । चक्रपथ निर्माणको आशा राखेको चीनको एक निजी कम्पनी पनि निरन्तर सम्पर्कमा आइरहेको छ ।
उसले पुरानो डीपीआरलाई पुनरावलोकन गरेर काम गर्ने तत्पराता देखाएको छ । यता, प्राधिकरणले निर्माणको जिम्मेवारीबारे कुनै प्रष्टता नभएको बताएको छ । आयोजना ७२ अर्बमा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना प्राधिकरणको छ ।
बाहिरी चक्रपथको हालसम्म चारवटा खण्डको डीपीआर भइसकेको छ भने दुईवटा खण्डको बाँकी छ । पहिलोखण्ड अन्तर्गतको यो परियोजनाका लागि करिब १४ हजार कित्ता जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । जग्गा अधिग्रहण गर्दा जग्गा विकासको माध्यम प्रयोग गर्ने हो भने सरकारले ठूलो लगानी गर्नुपर्दैन ।
उपभोक्ताबाट जग्गा लिने, निश्चित प्रतिशत काटेर आयोजना विकास गर्ने र व्यवस्थित घडेरीका रूपमा स्थानीयलाई नै फिर्ता गरिने प्राधिकरणको योजना छ ।
देखिएन दशैँको चहलपहल
पाल्पा । पाल्पामा पनि शुक्रवार बिहान १० बजेर २ मिनेटको शुभसाइतमा विजयादशमीको टीका लगाइएकोे छ
काठमाडौं । सङ्घीय गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले गृहनगर जनकपुरधामस्थित सपही गाउँमा गुरु
दमौली । एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले दसैंमा पनि कामलाई निरन्तरता दिएको
बेलायत : सांसद सर डेभिड अमेसको चक्कु आक्रमणबाट मृत्यु
अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति क्लिन्टन अस्पताल भर्ना